Ady amin’ny habadoana : lavitra ezaka ny tolona | NewsMada
Ady amin’ny habadoana : lavitra ezaka ny tolona
Fantatra nandritra ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra ary mikajy fa mbola 25%-n’ny Malagasy eo anelanelan’ny 15 ka hatramin’ny 59 taona no tsy mahay mamaky teny sy manoaratra.
Marolafy ny ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena hampidirana ny ankizy an-tsekoly saingy mbola tsy tratra ny tanjona. Lavitr’ezaka ny tolona hatao amin’ity ady amin’ny habadoana ity ary mitaky ny finiavan’ny tsirairay hisian’ny fahombiazana.
Anisan’ny sakana fototra ny fahantrana lalina iainan’ny firenena. Betsaka ny tokantrano tsy afaka mampianatra akory ny zanany. Misy ankizy 5 mahery anefa ao amin’ny ankohonana iray ka tsy misy mianatra akory na ny iray aza.
Eo koa ny fomban-drazana izay tsy manome vahana loatra ny fampianarana fa milofo kokoa amin’ny fitadiavana. Mbola mipetraka izany amin’ny faritra maro eto Madagasikara ka maha maro ireo ankizy tsy mahay mamaky teny sy manoratra.
Efa mitaky ny fahaizan-taratasy ny vanim-potoana ankehitriny. Afaka miditra biraom-panjakana, manao taratasy ary tsy azo ambakaina ireo mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy.